Uganda oo martigalisay Bandhiggii 4aad ee Shimbiraha Afrika - Dalxiis Weyn
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Uganda War Deg Deg Ah » Uganda oo martigalisay Bandhiggii 4aad ee Shimbiraha Afrika - Dalxiis Weyn
Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • dhaqanka • Warshadaha Warshadaha • Shirarka • News • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Uganda War Deg Deg Ah
Bandhigga Shimbiraha Afrika
Daawashada shimbiruhu waa mid ka mid ah meheradaha ugu wanaagsan ee dalxiiska ee ugu kobaca badan adduunka oo dhan, oo u soo baxaya qayb-hoosaad ka mid ah warshadaha dalxiiska ku salaysan dabeecadda halkaas oo dhiirrigelinta socdaalka dalxiisku ay diiradda saaraan meelaha booqashada si ay u arkaan shimbiraha.
Ilaaliyeyaasha shimbiruhu waa qaar ka mid ah kuwa ugu badan ee kharash gareeya qaybta socdaalka iyo dalxiiska.
Celcelis ahaan, waxay ku bixiyaan wax ka badan $ 7,000 muddada 21 maalmood ah, taasoo ka dhigaysa shimbirta daawashada hawl aad u faa'iido badan.
Daawashada shimbiruhu waxay noqotay waxqabad layaab leh oo ka jira jardiinooyinka qaranka ee Uganda, taasoo keentay dakhli dakhli dalxiis oo aad loogu baahnaa.
The Bandhigga Shimbiraha Afrika waxaa la qorsheeyay inay ka dhacdo December 10-12, 2021, Entebbe, Uganda.
Sida laga soo xigtay Herbert Byaruhanga, Agaasimaha Maareeyaha Bird Uganda Safaris Ltd .: “Ilaaliyaasha shimbiruhu waa qaar ka mid ah kuwa qarashka ugu badan ku bixiya waaxda socdaalka iyo dalxiiska iyada oo celcelis ahaan kharashkoodu ka badan yahay $ 7,000 muddo 21 maalmood ah, taasoo ka dhigaysa shimbirta daawashada ganacsi aad u faa'iido badan leh awood weyn oo lagu kala duwo dalxiiska Uganda oo si ciriiri ah ugu xiran raadraaca gorilla. Uganda waxay leedahay in ka badan 1,083 nooc oo shimbiro ah, oo qaarkood ay ku jiraan kuwa dhif ah ee heer qaran, gobol, Albertine endemics oo ilaaliyayaasha shimbiraha caalamiga ahi ay rabaan inay ku daraan liisaska hubinta shimbiraha noloshooda. ”
Stephen Masaba, oo ah Agaasimaha Horumarinta Ganacsiga ee Maamulka Duurjoogta Uganda, ayaa bogaadiyay dadaalka lagu tababarayo hageyaal shimbiro badan maadaama daawashada shimbiruhu ay noqdeen wax la yaab leh Jardiinooyinka qaranka Uganda, oo soo jiida dakhli badan.
Bandhiggan Afraad ee Afrika ee Shimbiraha ayaa noqday goob ay ku kulmaan qaybaha kala duwan ee bulshada daawata shimbiraha ee gudaha iyo dibadda Afrika. Waxaa jira baahida sii kordheysa ee xirfadleyda ku xeel -dheer shimbiraha iyo warshadaha dalxiiska si ay uga qeybgalaan socdaalka barashada ee dhacaya kahor bandhigga. Ka -qaybgalayaasha Safarrada Bandhigga Shimbiraha Afrika waxay had iyo jeer ka yimaadaan dalal kala duwan oo ay ka mid yihiin Panama, Taiwan, Australia, USA, UK, Rwanda, Kenya, iyo Tanzania. Iibiyeyaasha waxaa ka mid ah shirkadaha dalxiiska, hoteellada, hoyga, xeryaha, hagayaasha, iibiya buugaagta, farsamada gacanta, makhaayadaha, iyo naqshadeeyayaasha.
Bandhigga Shimbiraha Afrika waxaa la qorsheeyey in lagu dhiso astaan ​​aad u xooggan oo la garan karo oo soo jiidanaysa booqdayaasha gudaha iyo kuwa caalamiga ah waxayna taageertaa ilaalinta iyo koritaanka daawashada shimbiraha ee Uganda. Daabacaddani waxay soo jiidan doontaa boqolaal ka mid ah ilaaliyayaasha shimbiraha, qorayaasha safarka, hawl wadeennada dalxiiska, milkiilayaasha hoyga safari, iyo ciyaartoy kale oo ka tirsan waaxda dalxiiska ee adduunka oo dhan oo diiradda saaraya Afrika oo ah meesha ugu sareysa ee daawashada shimbiraha. Waxqabadyada bandhigga waxaa ka mid noqon doona safarada shimbiraha ee bandhiga hore iyo ka dib, bandhigyada, golayaasha ganacsiga, rugaha shimbiraha, socodka shimbiraha, rugaha sawir qaadista, tababbarka shimbiraha ee horumarsan, iyo furitaanka majaladda shimbiraha, si loogu magacaabo qaar.